राप्रपा र राप्रपा (संयुक्त)बीच एकीकरण गर्ने सहमति पत्रमा हस्ताक्षर- समाचार - कान्तिपुर समाचार
राप्रपा र राप्रपा (संयुक्त)बीच एकीकरण गर्ने सहमति पत्रमा हस्ताक्षर
काठमाडौँ — राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राप्रपा (संयुक्त) बीच एकीकरण गर्ने सहमति भएको छ । राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापा तथा राप्रपा (संयुक्त) का अध्यक्षद्वय पशुपतिशमशेर जबरा र प्रकाशचन्द्र लोहनी महाधिवेशन नभएसम्म एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष रहने गरी एकताको सैद्धान्तिक सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । महाधिवेशन डेढ वर्षभित्र गर्ने समझदारी बनेको छ ।
एकीकरणसम्बन्धी १० बुँदे आधारपत्रमा तीनै अध्यक्षले हस्ताक्षर गरेका छन् । एकीकृत पार्टीको नाम ‘राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी’ रहनेछ । झन्डा साबिक राप्रपाकै हुनेछ । चुनावचिह्न ६ महिनाभित्र उपयुक्त निकायबाट टुंगो लगाउने जनाइएको छ । पार्टीको वैचारिक आदर्श राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र उदारवाद हुने भनिएको छ ।
यही २८ गते बुधबार राष्ट्रिय सभागृहमा एक कार्यक्रमबीच पार्टी एकीकरणको औपचारिक घोषणा हुने राप्रपा (संयुक्त) का प्रवक्ता किरण गिरीले जानकारी दिए ।
एकीकृत पार्टीमा तीनै जना अध्यक्षको हैसियत र मर्यादाक्रम समान हुने आधारपत्रमा उल्लेख छ । केन्द्रीय कार्यसमितिमा तीन अध्यक्षको सम्झौता र सहमतिअनुसार संख्या निर्धारण हुनेछ । निर्देशन समिति, केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति र केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकको अध्यक्षता आलोपालो गर्ने सहमति छ । यससम्बन्धी व्यवस्थापन सचिवालयले गर्नेछ ।
राप्रपा केही प्रावधानप्रति असहमति कायम राखेर संविधानसँग सहकार्य गर्दै कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध रहने भएको छ । एकीकृत पार्टीको मुख्य नीति ‘सबै धर्मबीच समानता र पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र’ रहने जनाइएको छ ।
प्रकाशित : फाल्गुन २५, २०७६ ०७:१८
स्वास्थ्यकर्मी नै जोखिममा
फाल्गुन २५, २०७६ घनश्याम गौतम
(रूपन्देही) — कोरोना भाइरस (कोभिङ–१९) संक्रमणको त्रास बढिरहेका बेला भारतसँग सीमा जोडिएको प्रदेश ५ का विभिन्न नाकामा तालिमबिनै स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरिएको छ । स्वास्थ्यकर्मीले प्रयोग गर्ने मास्कदेखि परीक्षणका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री र बस्ने स्थानसम्म अभाव छ । अधिकांश डेस्क सडकमै स्थापना गरिएका छन् । रोकथामको ज्ञान र जोखिम न्यूनीकरणका उपकरणबिना खटिएका स्वास्थ्यकर्मी नै संक्रमणको जोखिममा छन् ।
भैरहवास्थित अध्यागमन विभागका अनुसार बेलहिया नाका हुँदै तेस्रो देश र भारतका गरी दैनिक एक हजार चार सय नागरिक नेपाल प्रवेश गर्छन् । दिल्लीबाट दैनिक ३४ बस यात्रु लिएर बुटवल आउँछन् । भारतका विभिन्न स्थानमा संक्रमित फेला परेपछि तीनै तहका सरकारले उच्च सतर्कता अपनाएका छन् । बेलहियामा स्थापना गरिएको हेल्थ डेस्कमा सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले दैनिक ६ स्वास्थ्यकर्मी खटाएको छ । बिहान ६ बजेदेखि राति १० बजेसम्म आलोपालो खटिन्छन् ।
नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाको सहयोगमा स्थानीय प्रशासनले माघ १६ देखि उनीहरूलाई खटाएको हो । उनीहरूले आवश्यक पर्ने कुनै सामग्री नपाएको नगरपालिकाकी स्वास्थ्य शाखा प्रमुख उमा थापाले बताइन् । ‘शंका लागे सामान्य सोधपुछ गर्ने हो, पहिचान गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भनिन् । उनले दैनिक १६ घण्टा ६ जनाको टिमले काम गर्ने गरेको र राति निर्बाध विदेशी आउने गरेको बताइन् ।
संक्रमितको नजिक बस्दा र उसले प्रयोग गरेको सामान छुँदा पनि कोभिङ–१९ सर्ने चिकित्सकको भनाइ छ । त्यसबाट बच्न मास्क, पन्जा, एप्रोन र चस्मा न्यूनतम सामग्री हुन् । ज्वरो परीक्षणका लागि थर्मोमिटर अति आवश्यक पर्छ तर ती सामग्री व्यवस्थापन हुन नसकेको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. राजेन्द्र खनालले बताए । ‘अहिलेसम्म सातवटा एप्रोन आएको हल्ला सुनिएको छ तर उपलब्ध छैन,’ उनले भने । प्रदेशमा संक्रमितको स्वाब संकलन, भण्डारण र परीक्षण गर्न सक्ने प्रयोगशाला छैन । अहिले प्रदेशम दुई जना मात्र टेक्निसियन रहेको जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका निर्देशक डा. राजेन्द्रकुमार गिरीले बताए ।
संघीय र प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयको समन्वयमा प्रदेश ५ का विभिन्न नाकामा दुईवटा टोली बनाएर अध्ययन गरिएको थियो । भारतसँग नाका जोडिएका तराईका नवलपरासी, कपिलवस्तु र रूपन्देहीमा वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा. उमाशंकर चौधरी एवं दाङ, बाँके र बर्दियाका नाकाको अवस्था अवलोकन गर्न स्वास्थ्य विभागका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक चूडामणि भण्डारीको नेतृत्वमा टोली खटिएका थिए । चौधरी र भण्डारीले शुक्रबार सामाजिक विकास मन्त्रालयमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै जनशक्ति र सामग्रीको चरम अभाव रहेको बताए । प्रदेश ५ मा रूपन्देहीको बेलहिया, परासीको महेशपुर, कपिलवस्तुको कृष्णनगर, दाङको कोइलाबास र नेपालगन्जको जमुनाह बढी आवागमन हुने नाका हुन् । अधिकांश नाकामा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीको अवस्था र समस्या उस्तै रहेको टोली प्रमुख भण्डारीले बताए ।
प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालले सरकारको अधिकतम प्रयासमा प्रदेशभरिका नाकामा प्रयोग गर्ने गरी अहिले ४५ वटा थर्मोमिटर आइपुगेको बताए । अस्पतालमा डिजिटल थर्मोमिटरबाट काम चलाउन निर्देशन गरिएको छ । ‘हामी जनशक्ति, उपकरण र सामग्रीको चरम अभावमा छौं,’ उनले भने ।
प्रकाशित : फाल्गुन २५, २०७६ ०७:१६